जब पुरुषको शरीरमा भेटियो महिलाको गर्भाशय ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more जब पुरुषको शरीरमा भेटियो महिलाको गर्भाशय !
माघ २४ गते, २०७४ - ०७:२०
२५ वर्षीया मान्यता (नाम परिवर्तन) को होसहवास उठ्यो जब उनका पति मुकेशको शरीरमा महिलाको अंग भेटियो । मुकेशको शरीरमा पुरुष अंगका साथै गर्भाशय (युट्रस) र अण्डाशय (ओभरी) र गर्भाशय ट्यूबको पनि विकास भएको रहेछ । महिला अंग विकसित भएको भए पनि उनको स्वास्थ्यमा त्यसको असर भने देखिएको थिएन ।
माघ २४ गते, २०७४ - ०७:२० मा प्रकाशित